Dhalinyaro Laga soo Daayay Xabsiyada Liibiya Oo Saakay Muqdisho la Keenay.(Sawirro) | Awdalmedia.com
Waxaa maanta garoonka Diyaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dajiyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga soo daayay xabsiyo kuyaala dalka Liibiya oo ay in mudo ah ku xirnaayeen.
Dhalinyarada maanta Muqdisho la keenay ayaa gaarayay 13- ruux oo mid kamid ah ay gabar tahay, waxa ayna dhalinyaradan doorteen in dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii xabsiyo ay ku xirnaayeen laga soo daayay.
Masuuliyiin katirsan Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa dhalinyaradan Liibiya kasoo laabatay kuso dhaweeyay garoonka Diyaaraaha Aadan Cadde, waxaa sidoo kale garoonka dhalinyaradan kusoo dhaweeyay xubno eheladooda kamid ah.
Qaar kamid ah dhalinyaradan ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in dalkooda kusoo laabtaan , waxa ayna xuseen in dhibaatooyin xanuun badan lasoo kulmeen intii ay joogeen dalka Liibiya.
Dowlada Soomaaliya ayaa dadaal badan u gashay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed looga soo deyn lahaa xabsiyada Liibiya dalkana dib loogu soo celin lahaa, waxaana Muqdisho la keenay qeybtii sadexaad Soomaali kasoo laabatay dalka Liibiya.